လည်ပင်းဇက်ကြောနာခြင်းအကြောင်း သိကောင်းစရာများ | OnDoctor
မည်သည့်အရာမှ မတည်မြဲနိုင်ဟု ဆိုတဲ့အတိုင်း လူသားတွေရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ဟာလဲ နိစ္စဓူဝလှုပ်ရှားမှုတွေကြောင့် တစ်ချိန်ချိန်မှာ ကိုက်ခဲ နာကျင်မှုဝေဒနာတွေကို ခံစားရလေ့ရှိပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ယနေ့ခေတ်ရဲ့နေထိုင်မှုပုံစံတွေကြောင့် လူသားတွေဟာ လည်ပင်းဇက်ကြောနာခြင်းဒဏ်ကို အနည်းနဲ့အများ ခံစားနေကြရပါတယ်။
ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ လည်ပင်းကို ထောက်ကန်ပေးထားတဲ့ လည်ပင်းအရိုးဆစ်တွေဟာ ၇ ခုရှိပြီး အဆစ်တစ်ခုချင်းစီရဲ့ ကြားထဲမှာ Disc အဆစ်ပြားလေးတွေ ရှိပါတယ်။ ထိုအရိုး၊ အဆစ်ပြားတွေအပြင် လည်ပင်းတဝိုက်မှာရှိတဲ့ အရွတ်အကြောနဲ့ ကြွက်သားများကလည်း ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ ဦးခေါင်းနဲ့ လည်ပင်းကို ထိန်းထားပေးခြင်း၊ ချောချောမွေ့မွေ့ လှုပ်ရှားနိုင်စေခြင်းတို့ကို လုပ်ဆောင်ပေးပါတယ်။ ထိုအခြင်းအရာတွေကို ထိခိုက်စေတဲ့ ရောင်ရမ်းခြင်း၊ အနာတရဖြစ်ခြင်းတို့ဟာ လည်ပင်းဇက်ကြောနာခြင်းကို ဖြစ်စေပါတယ်။
➡️ လည်ပင်းဇက်ကြောနာခြင်းကို ဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းအရာများ
လည်ပင်းကြွက်သားဒဏ်ဖြစ်ခြင်း (သို့) ဇက်ကြောတက်ခြင်း
အနေအထိုင်ပုံစံ မမှန်ခြင်း၊ မလှုပ်မရှားဘဲ အထိုင်များခြင်း၊ ကွန်ပြူတာ၊ စမတ်ဖုန်း ကြာရှည်စွာ အသုံးပြုခြင်းတို့ကြောင့် ဇက်ကြောတက်ခြင်းကို ဖြစ်စေပါတယ်။
အမြင့်မှ ပြုတ်ကျခြင်း၊ ယာဉ်တိုက်မှုများနှင့် တချို့သောအားကစားအမျိုးအစားတို့ဟာ အခန့်မသင့်လျှင် လည်ပင်းကို အထူးထိခိုက်စေပါတယ်။
အရိုးအတက်ထွက်ခြင်း၊ သွေးလေးဖက်နာရောဂါ၊ အရိုးပွခြင်း၊ အရိုးကျီးပေါင်းရောဂါ၊ လည်ပင်း disc အဆစ်ပြားကျွံခြင်း အစရှိတဲ့ရောဂါတွေဟာလည်း လည်ပင်းနာခြင်းကို ဖြစ်စေပါတယ်။
ဦးနှောက်အမြှေးပါးရောင်ခြင်းဟာလည်း ဇက်ကြောတောင့်ခြင်းကို ဖြစ်စေတဲ့ အရေးပေါ်အခြေအနေတစ်ခုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အရိုးအဆစ်တွင် ပိုးဝင်ခြင်း၊ ပြည်တည်ခြင်း၊ အလုံးအကျိတ် တည်ခြင်း၊ အရိုးကင်ဆာရောဂါ၊
မွေးရာပါ အရိုးအဆစ် မူမမှန်ခြင်း စတာတွေကြောင့်လည်း ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
တစ်ခါတစ်ရံ နှလုံးရောဂါအခံရှိသူများတွင် ရင်ဘက်အောင့်ခြင်းနှင့်အတူ လည်ပင်း၊ မေးရိုးတစ်လျှောက် နာကျင်လျှင် ဆေးရုံသို့ အရေးပေါ်သွားရောက်ပြသသင့်ပါတယ်။
ဇက်ကြောနာခြင်းကို သက်သာအောင် အိမ်မှာ ဘာတွေလုပ်လို့ရလဲ ?
– ဇက်ကြောနာတဲ့ အစောပိုင်းရက်တွေမှာ ရေခဲကို မိနစ် ၂၀ ခန့်နှင့် တစ်နေ့ကို အကြိမ်ရေများများ ကပ်ပေးပါ။ နောက်ပိုင်းမှာတော့ ရေနွေးအိတ်ကပ်ပေးခြင်း၊ ရေနွေးဖြင့် ရေချိုးပေးခြင်းကို ပြုလုပ်ပေးပါ။
– အနာသက်သာစေရန် Diclofenac or Methanol ပါသောလိမ်းဆေးများ လိမ်းခြင်း၊ Acetaminophen or Ibuprofen ပါတဲ့ဆေးများကို အညွှန်းပါအတိုင်း သောက်ပေးခြင်းများ ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ် ( အစာနှင့် တွဲသောက်ရန် )
– အနာသက်သာလျှင် သင့်တော်ရာ ဦးခေါင်းနှင့် လည်ပင်းလေ့ကျင့်ခန်းများကို နေ့စဉ် ပြုလုပ်ပေးပါ။
– အနေအထိုင်ပုံစံမှန်အောင်နေပါ။ အနေအထား တစ်ပုံစံတည်းဖြင့် အချိန်ကြာမြင့်စွာနေခြင်း မပြုပါနဲ့။
– ပြင်းထန်သော လေ့ကျင့်ခန်းများ၊ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုများ ပြုလုပ်ခြင်း၊ လေးလံသောအရာဝတ္ထုများ မခြင်းများကို ရှောင်ပါ။ ရောဂါလက္ခဏာများ သက်သာမှသာ တစ်ဖြည်းဖြည်း ပြန်လည်လုပ်ကိုင်ပါ။
– လည်ပင်းနှင့်ပုခုံးကြွက်သားများကို ညင်သာစွာနှိပ်နယ်ပေးပါ။
– လည်ပင်းကို သက်တောင့်သက်သာရှိစေသည့် မမာလွန်းမပျော့လွန်းသောခေါင်းအုံး (သို့) ဇက်ကြောတက်သမားများအတွက် သီးသန့်ထုတ်လုပ်ထားသောခေါင်းအုံးများနှင့် အိပ်စက်ပါ။
– လည်ပင်းခပ်ကျပ်ကျပ်အကျီများ၊ လည်ပတ်၊ ဘယက်အသုံးအဆောင်များအား ဝတ်ဆင်ခြင်းအား ခေတ္တရှောင်ပါ။
လည်ပင်းဇက်ကြောနာခြင်းအများစုမှာ ရက်အနည်းငယ်အတွင်း ပျောက်ကင်းနိုင်သော်လည်း လည်ပင်းနာစေသောအကြောင်းအရာအချို့မှာ အရေးကြီးပြီး ဆေးရုံဆေးခန်းသို့ သွားရောက်ပြသသင့်ပါတယ်။ ၄င်းတို့မှာ –
– အိမ်တွင်းကုထုံးများဖြင့် တစ်ပတ်ကျော်ကြာသည်အထိ မသက်သာခြင်း
– လည်ပင်းအား ပြင်းထန်စွာ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်း
– အကြောင်းအရာတိတိကျကျမရှိဘဲ ဇက်ကြောအလွန်အမင်းနာကျင်ခြင်း
– ဖျားခြင်း၊ ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ ပျို့အန်ခြင်း
– မေးစိကို ရင်ဖက်နှင့်ထိသည်အထိ မငုံ့နိုင်ခြင်း
– အသက်ရှုရခက်ခဲခြင်း၊ အစာမမျိုနိုင်ခြင်း
– လည်ပင်းတစ်ဝိုက် အလုံးအကျိတ်များ ပေါ်လာခြင်း
– ခြေလက်များ ထုံကျဉ်ခြင်း
– ခြေလက်တစ်လျှောက် နာကျင်ခြင်း
– ခြေလက်များ မလှုပ်ရှားနိုင်တော့ခြင်း
– ဆီးဝမ်း မမှန်ခြင်း၊ မထိန်းနိုင်ခြင်းတို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
လည်ပင်းဇက်ကြောမနာအောင် ဘယ်လိုကာကွယ်ကြမလဲ ?
လူအများစုမှာ ဇက်ကြောနာစေတဲ့ အကြောင်းအရင်းတွေဟာ အနေအထိုင်ပုံစံ မမှန်ခြင်းနဲ့ အသက်အရွယ်အိုမင်းတာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ အရိုးအကြောပြဿနာတွေပဲ ဖြစ်တဲ့အတွက် အောက်ပါနည်းလမ်းတွေကို လိုက်နာခြင်းအားဖြင့် ဇက်ကြောပြဿနာများကို လျှော့ချ ကာကွယ်နိုင်ပါတယ်။
– အနေအထားပုံစံမှန်အောင်နေပါ။ မတ်တပ်ရပ်နေစဉ် (သို့) ထိုင်နေစဉ်တွင် ပုခုံးနှစ်ဖက်သည် တင်ပါးဖြင့် တစ်တန်းရှိ၍ ခါးကိုလဲ မတ်မတ်ထားရပါမယ်။
– အထိုင်မများပါစေနဲ့။ ထိုင်၍ အချိန်အတော်ကြာ အလုပ်လုပ်ခြင်း (သို့) ခရီးသွားလာနေလျှင် မကြာခဏထပြီး လမ်းလျှောက်ပေးပါ။ ခေါင်းနှင့် ပုခုံးလေ့ကျင့်ခန်း ပြုလုပ်ပေးပါ။
– မိမိ၏ အလုပ်စားပွဲ၊ ကွန်ပြူတာများကို သက်တောင့်သက်သာရှိအောင် စီစဉ်ထားရှိပါ။
– ဖုန်းကို နားနှင့်ပုခုံးကြားညှပ်၍ မကြာခဏပြောခြင်းအား ရှောင်ကြဉ်ပါ။
– လေးလံသော အရာဝတ္ထုများ၊ အိတ်များကို ပုခုံးတွင် သိုင်း၍သယ်ဆောင်ခြင်းများ မပြုလုပ်ပါနဲ့။
– အိပ်တဲ့ပုံစံ မှန်ကန်ပါစေ။ မိမိ၏ခေါင်းနှင့်လည်ပင်းသည် ခန္ဓာကိုယ်နှင့် တစ်ပြေးညီတည်း ရှိရပါမယ်။ ဇက်ကြောဒဏ်အခံရှိပါက ဖြစ်နိုင်လျှင် ဇက်ကြောအောက်တွင် ခေါင်းအုံးအသေးခံ၍ အိပ်စက်ပါ။ ပက်လက်အိပ်မည်ဆိုလျှင် ပေါင်နှစ်ဖက်အောက်တွင် ခေါင်းအုံး (သို့) ဖက်လုံးခံ၍ အိပ်နိုင်ပါတယ်။
– ဆေးလိပ်သောက်ခြင်း ရှောင်ကြဉ်ပါ !
– ကိုယ်လက်လေ့ကျင့်ခန်း ပြုလုပ်ပေးခြင်းဖြင့် လည်ပင်းဇက်ကြောနာခြင်းများကို လျှော့ချ / ကာကွယ်ပြီး ကျန်းမာသာယာသော နေ့စဉ်ဘဝကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေ။ ။